တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာခြင်း - အချက်အလက် | NHK WORLD-JAPAN Live & Programs
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာခြင်း
1. မုန်တိုင်း ဖြတ်ကျော်သွားပြီးတဲ့နောက် ဖြစ်တတ်တဲ့ ဘေးအန္တရာယ် တချို့ကို ပြောပြပါမယ်။
မုန်တိုင်းချဉ်းကပ်လာနေချိန် အပြင်ဘက်မှာနေရင် အန္တရာယ်ကြီးတယ်ဆိုတာ အသေအချာပါပဲ။ မုန်တိုင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာလည်း အပြင်မှာ လမ်းလျှောက်တာ ဒါမှမဟုတ် ကားမောင်းတာလည်း အန္တရာယ်များ လွန်းပါတယ်။
လေပြင်းတွေတိုက်ခတ်တာကြောင့် လွင့်လာတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေက ကားလမ်းမပေါ်နဲ့ လူသွားလမ်းတွေပေါ်မှာ ဆက်ရှိနေနိုင်ပါသေးတယ်။ လမ်းပေါ်မှာ ကျနေတဲ့ အဲဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ တိုက်မိပြီး ချော်လဲကျနိုင်ပါတယ်။ ခြေထောက်တွေမှာ ဒဏ်ရာ ရနိုင်ပါတယ်။ ကားမောင်းနေတဲ့ အချိန်ဆိုရင်လည်း လမ်းပေါ်က အပျက်အစီးတွေနဲ့ ကားနဲ့ တိုက်မိပြီးတော့ မတော်တဆမှုတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လေတိုက်လို့ လမ်းပေါ်မှာ ပြုတ်ကျနေတဲ့ အပိုင်းအစလေးတွေကလည်း ကားဘီးပေါက်စေနိုင်ပါတယ်။
လမ်းပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ အရေးပေါ်အခြေအနေတွေကို ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ ဂျပန်မော်တော်ယာဉ်အဖွဲ့ချုပ်က မတော်တဆမှု တော်တော်များများက ကားဘီးပေါက်တာကြောင့် ဖြစ်တာလို့ ပြောပါတယ်။ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်လို့ လွင့်ထွက်လာတဲ့ ခေါင်မိုးအပိုင်းအစတွေ၊ နံရံတွေ ဒါမှမဟုတ် သစ်ကိုင်းတွေပေါ်ကို ကားတွေက ဖြတ်မောင်းတာကြောင့် ဖြစ်တဲ့ မတော်တဆမှုတွေက များတယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း အရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလက ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတစ်လျှောက် အင်အားပြင်း တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ချိန်က ၃ ရက်အတွင်း အိုစာကာ ခရိုင်တစ်ခုတည်းကတင် အရေးပေါ်ခေါ်ဆိုမှု ၇၈၂ မှု ရှိခဲ့တယ်လို့ အဲဒီအရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် လူတွေအနေနဲ့ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း တိုက်ပြီးသွားတဲ့နောက် ကားမောင်းတဲ့အချိန်မှာ သတိထားပြီး လမ်းအခြေအနေကို သေသေချာချာ စစ်ဆေးကြဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။
2. လေပြင်းတွေ တိုက်ခတ်တာကနေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အပျက်အစီးတွေ အကြောင်း ပြောပါမယ်။
လေတိုက်နှုန်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်တတ်တဲ့ အပျက်အစီးတွေအကြောင်းကို ဥပမာတွေနဲ့ ပြောပြပေးသွားပါမယ်။
အခိုက်အတန့်အားဖြင့် အမြင့်ဆုံး တစ်နာရီကို ၁၄၄ ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ တိုက်တဲ့ လေပြင်းတွေဟာ ဆိုင်းဘုတ်တွေ လွင့်ထွက်တာနဲ့ လမ်းပေါ်မှာ မောင်းနေတဲ့ ကုန်တင်ကားတွေကို မှောက်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
တစ်နာရီကို ၂၁၆ ကီလိုမီတာ အရှိန်နဲ့ အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းဟာ ရှင်ကဲန်းဆန်ကျည်ဆန်ရထားရဲ့ အရှိန်နဲ့ အတူတူလောက်ရှိပါတယ်။ အဲဒီလေတိုက်နှုန်းရဲ့ အရှိန်ဟာ အဆောက်အအုံတွေကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာ တစ်နာရီကို ၂၈၈ ကီလိုမီတာအထိ လေပြင်းတွေ တိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။
လေပြင်းတွေ တိုက်ခတ်တဲ့အချိန်မှာ လွင့်မျောလာတဲ့ ထီးတွေက ပြတင်းပေါက်မှန်တွေကို လာရိုက်ပြီး မှန်ကွဲတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် အိမ်အပြင်မှာရှိတဲ့ ထီးတွေ၊ အဝတ်လှန်းစင်တိုင်တွေလို လေပြင်းတွေ တိုက်ခတ်လာရင် လွင့်ထွက်လာနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းနဲ့ လေပြင်းတွေ မတိုင်ခင် သိမ်းဆည်းထားကြဖို့ အကြံပေးထားပါတယ်။ အဝတ်စိုတွေနဲ့ မဂ္ဂဇင်းတွေကလည်း လေတိုက်လို့ လွင့်မျောလာရင် အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။
အိမ်တွေမှာ ပြတင်းကာတွေကိုပိတ်ထားရင် ပိုပြီး လုံခြုံနိုင်ပါတယ်။
အိမ်တွေမှာ ပြတင်းကာတွေ တပ်မထားဘူးဆိုရင် ပြတင်းပေါက်မှန်တွေကို ကတ်ထူပြားတွေနဲ့ ကာထားတာ ဒါမှမဟုတ် ဖလင်ပြား ကပ်ထားတာတွေက မှန်စတွေ ပြန့်ကြဲမသွားအောင် ကာကွယ်ရာမှာ ထိရောက်မှုရှိပါတယ်။
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြောင့် မီးပျက်သွားတာမျိုးနဲ့ ရေ ပြတ်တောက် သွားတာ မျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် အစားအစာတွေကို အနည်းဆုံး ၃ ရက်စာလောက် ဆောင်ထားဖို့နဲ့ ဘက်ထရီတွေကို အားသွင်းထားကြဖို့ လူတွေကို အကြံပြုထားပါတယ်။
လေပြင်းမုန်တိုင်းတွေ စတိုက်လာပြီး နောက်ပိုင်းကျမှ စတင် ပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင် အန္တရာယ်များပါတယ်။ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း မလာခင်ကတည်းက ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ အကြံပြုတိုက်တွန်း ထားပါတယ်။
လူတွေအနေနဲ့ မုန်တိုင်းရဲ့ ဗဟိုချက်နေရာနဲ့ ဝေးတယ်ဆိုရင်တောင်မှ လေဆင်နှာမောင်းအပါအဝင် လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတိထားသင့်ပါတယ်။
တကယ်လို့ လျှပ်စီးလက်တာ ဒါမှမဟုတ် ရုတ်တရုတ်လေပြင်းတိုက်တာ၊ ဒါမှမဟုတ် ကောင်းကင်တစ်ခုလုံး မည်းမှောင်သွားတာမျိုး မိုးမည်းတိမ်တောင်တွေဖြစ်လာတဲ့ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်လာပြီဆိုရင် လူတွေအနေနဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်ခိုင်မာတဲ့ အဆောက်အအုံတွေမှာ ဘေးကင်းလုံခြုံအောင် ရှာဖွေပြီးနေကြဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။
အိမ်တွေ၊ ရုံးတွေ၊ အဆောက်အအုံတွေထဲမှာ ရှိနေတဲ့ အချိန်ဆိုရင် လိုက်ကာတွေကို ပိတ်ထားသင့်ပြီး ပြတင်းပေါက်နည်းတဲ့ ဒါမှမဟုတ် မရှိတဲ့ အခန်းတစ်ခန်းထဲကို ရွှေ့ပြီး နေသင့်ပါတယ်။
3. မုန်တိုင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဒီရေမြင့်တက်မှု အန္တရာယ် အကြောင်းနဲ့ ဘယ်လို ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေ ပြုလုပ်သင့်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကို ပြောပြပါမယ်။
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းတစ်ခု ချဉ်းကပ်လာတာ ဒါမှမဟုတ် လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရဲ့ ရေမျက်နှာပြင်က မြင့်တက်လာပြီး မုန်တိုင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဒီရေမြင့်တက်မှု ဆိုတာ ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ပြင်းထန်တဲ့ လေပြင်းတွေ တိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်သွားပြီး ပင်လယ် ကမ်းရိုးတန်းဧရိယာတွေကို ဒီရေလှိုင်းလုံးကြီးတွေ ရိုက်ခတ်တာမျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံတစ်ဝန်းမှာ ဒီလို သဘာဝဖြစ်စဉ်တွေ အကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ပြီး အကြီးအကျယ် ထိခိုက် ပျက်စီးမှုတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်က ဂျပန်နိုင်ငံ အနောက်ပိုင်း အိုစာကာ ပင်လယ်ကွေ့မှာ Jebi တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြောင့် ကြီးမားတဲ့ ဒီရေမြင့်တက်မှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ခဲန်းစိုင်း နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ရဲ့ လေယာဉ်ပြေးလမ်းနဲ့ လေဆိပ်အဆောက်အအုံရဲ့ မြေအောက်ခန်းတွေ အပါအဝင် ဧရိယာတော်တော်များများမှာ ရေလွှမ်းမိုးမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ရေလွှမ်းမိုးတဲ့နေရာတွေ ပြန်နာလန်ထူဖို့ အချိန် ၁၇ ရက် ကြာခဲ့ရပါတယ်။
၂၀၀၄ ခုနှစ်တုန်းက Chaba တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြောင့် Seto ကုန်းတွင်းပိုင်းပင်လယ်ရဲ့ နေရာတော်တော်များများမှာ မုန်တိုင်းကြောင့် ဒီရေမြင့်တက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ခါဂါဝါ (Kagawa) နဲ့ အိုကာ့ယာမာ့ (Okayama) ခရိုင်တွေမှာ လူ ၃ ဦး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
၁၉၅၉ ခုနှစ်က Ise Bay တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ခဲ့ချိန်က မုန်တိုင်းကြောင့် ဒီရေမြင့်တက်မှုက အကြီးအကျယ် ထိခိုက် ပျက်စီးမှုတွေကို ဖြစ်စေခဲ့တာ သိထားကြပါတယ်။ အားကောင်းလှတဲ့ အဲဒီ ဒီရေလှိုင်းတွေရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုကြောင့် Aichi နဲ့ Mie ခရိုင်တွေမှာ လူပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ မုန်တိုင်းကြောင့် ဖြစ်တဲ့ဒီရေမြင့်တက်မှုနဲ့ ကြီးမားတဲ့လှိုင်းလုံးကြီးတွေနဲ့ ပေါင်းစပ် သွားတဲ့အခါ ပိုပြင်းထန်ပြီး အန္တရာယ်ပိုများလာတဲ့ အခြေအနေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တုန်းက ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ မုန်တိုင်းဗဟိုချက်ရဲ့ လေဖိအား ၈၉၅ ဟက်တိုပါစကယ် ရှိတဲ့ Haiyan တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမုန်တိုင်းတိုက်ချိန်က လှိုင်းကြီးတွေဟာ မီတာ၂၀ ကျော် အမြင့်အထိ ရှိခဲ့တယ်လို့ ယုံကြည်ရပါတယ်။
မျက်မြင်တွေ့သူ တစ်ဦးက မုန်တိုင်းကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ အမြင့် ၅ မီတာကျော်တဲ့ ဒီရေမြင့်တက်မှုဟာ "ဆူနာမီလိုပဲ"လို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက မုန်တိုင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဒီရေမြင့်တက်မှုဟာ လှိုင်းလုံးကြီးတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်သွားခဲ့ပုံ ပေါ်ပါတယ်။
မုန်တိုင်းကြောင့် ဒီရေမြင့်တက်မှု မရှိခဲ့တဲ့ ဧရိယာတွေမှာတောင်မှ လှိုင်းတွေရဲ့ အမြင့်က ၁၄ မီတာအထိ ရှိခဲ့တာကို အတည်ပြုထားပါတယ်။ အဲဒီတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းထဲမှာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ သေဆုံး/ပျောက်ဆုံးသူ ၇၀၀၀ ကျော် ရှိခဲ့ပါတယ်။ မုန်တိုင်းကြောင့် ဒီရေမြင့်တက်မှုကနေ မိမိကိုယ်ကိုယ် ကာကွယ်ရာမှာ အန္တရာယ်တွေကို ကြိုတင်သိရှိ နားလည်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ရေကြီးမှု အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ ဧရိယာတွေကို ဒေသန္တရအစိုးရက ပြုစုထားတဲ့ ဘေးအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဒေသ မြေပုံတွေမှာ ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ ရေကြီးမှုအန္တရာယ် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အလိုက် မြေပုံပေါ်မှာ အရောင်အမျိုးမျိုးနဲ့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အထူးသဖြင့် "ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်း ဒါမှမဟုတ် မြစ်ဝ နဲ့ နီးတဲ့ ဧရိယာတွေ" နဲ့ "ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အမြင့်ဝန်းကျင် ဒါမှမဟုတ် အဲဒါထက် နိမ့်တဲ့ ဧရိယာတွေ"မှာ မုန်တိုင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဒီရေမြင့်တက်မှုကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုဖြစ်နိုင်ခြေ အန္တရာယ် ပိုများပါတယ်။
ချက်ချင်း တိမ်းရှောင်ဖို့ ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ အကြံပေးချက် ဒါမှမဟုတ် မုန်တိုင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဒီရေမြင့်တက်မှုဆိုင်ရာ သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အခါ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်မှုကို လုပ်သင့်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မှတ်ထားစေလိုတဲ့ အချက်တွေရှိပါတယ်။ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း နီးကပ်လာတဲ့အခါ မုန်တိုင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဒီရေမြင့်တက်မှု မတိုင်ခင် လေပြင်းတွေ စတင် တိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီး အပြင်ဘက်မှာ လှုပ်ရှားသွားလာဖို့ ခက်ခဲ ပါလိမ့်မယ်။ တိမ်းရှောင်မှုကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် လုပ်ဆောင်ဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
4. မြစ်ရေကြီးခြင်း အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောပြပါမယ်။
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်တဲ့ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုဟာ အရင်တုန်းက အဓိက မြစ်တွေ ရေကြီးရေလျှံမှုတွေ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်က Hagibis တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာ ဂျပန်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ချီကုမာ့ (Chikuma) မြစ်နဲ့ တခြား မြစ်တွေမှာ နေရာပေါင်း ၁၄၀ ကျော်မှာ တာရိုးကျော်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပြီး ကျယ်ပြန့်တဲ့ ဧရိယာမှာ အကြီးအကျယ် ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ မြစ်ရေကြီးခြင်း မြစ်ရေလျှံခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတိထားသင့်တဲ့ အချက်တွေကို ပြောပြပေးပါမယ်။
ဒေသန္တရ အာဏာပိုင်တွေက ပြုစုထားတဲ့ ဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်နိုင်တဲ့ဒေသကို ပြတဲ့မြေပုံကို လေ့လာပြီး မိမိနေထိုင်တဲ့ဒေသကို ရေကြီးမှုအတွက် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဧရိယာ သတ်မှတ်ထား မထားဆိုတာ ကြိုတင် လေ့လာ စစ်ဆေးထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ မိမိနေထိုင်တဲ့ ဒေသမှာ ရေကြီး ရေလျှံမှုဖြစ်ခဲ့ရင် ရေအနက် ဘယ်လောက်ရှိမယ်ဆိုတဲ့ ခန့်မှန်းချက်ကို လေ့လာထားဖို့လည်း အကြံပြုထားပါတယ်။ ရေက ၃ မီတာကျော် အနက် ရှိနိုင်တယ်လို့ ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားရင် ဒါဟာ အဆောက်အအုံတစ်ခုရဲ့ ဒုတိယထပ်အထိ ရေလွှမ်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါ။ ၅ မီတာ ကျော်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ အဆောက်အအုံရဲ့ ၃ ထပ်အထိ ရောက်နိုင်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ဒေသန္တရ မိုးလေဝသစောင့်ကြည့်ရေးဌာနတွေက ရေကြီးမှု အန္တရာယ်နဲ့ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ဒေသတွေကို မြစ်ရေကြီးခြင်း သတိပေးချက်တွေ ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဗဟိုအစိုးရနဲ့ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့တွေကလည်း မိုးလေဝသအရာရှိတွေနဲ့အတူ ပူးပေါင်းပြီး အဓိက မြစ်လက်တက်တွေရဲ့ ရေကြီးမှုအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ အဲဒီလို သတင်း အချက်အလက်တွေ ထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာ တတ်နိုင်သမျှ အစောဆုံး တိမ်းရှောင်ကြဖို့က အလွန် အရေးကြီးပါတယ်။ သေးငယ်တဲ့ မြစ် ဒါမှမဟုတ် ဆည်မြောင်း တူးမြောင်းတွေဆိုရင်တောင် ကြီးမားတဲ့ အန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
မိုးအကြီးအကျယ်ဆက်ပြီး ရွာနေတဲ့အခါ မြစ်ရေတက်လာပြီး တာရိုးကျော်မှုတွေ ရုတ်တရက် ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုအချိန်မှာ လူတွေ ကားမောင်းနေတာ ဒါမှမဟုတ် လမ်းလျှောက်သွားနေစဉ်မှာ တော်တော်များများ သေဆုံးမှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် မိမိကိုယ်ကိုယ် ကာကွယ်ဖို့အတွက် မိုးသည်းသည်း ထန်ထန်ရွာလာပြီး လေပြင်းတွေ တိုက်နေတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ် မိုးမှောင်တွေ ကျလာပြီးနောက်မှာ အပြင်မှာရှိတဲ့ တိမ်းရှောင်ရေး စခန်းတွေကို ရှာတာထက် ခိုင်မာတောင့်တင်းတဲ့ အဆောက်အအုံတစ်ခုရဲ့ ဒုတိယထပ်ကို ရွှေ့ပြောင်းကြဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။
5. တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း ချဉ်းကပ်မလာခင် တစ်ဦးချင်းစီက ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အသေးစိတ် ဘယ်လိုပြင်ဆင် ထားရမလဲဆိုတဲ့ အကြောင်း ပြောပါမယ်။
အရင်ဆုံးနဲ့ အဓိကအကျဆုံးအချက်ကတော့ မုန်တိုင်းကြောင့် ဒီရေလှိုင်းကြီးတွေဖြစ်မလာခင်၊ မိုးသည်းသည်းထန်ထန် မရွာခင် အိမ်အပြင်ဘက်ပိုင်းကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရပါမယ်။ အသေးစိတ် ပြောရမယ်ဆိုရင်-
-အိမ်အပြင်ဘက် ဒါမှမဟုတ် ဝရံတာမှာ ထားထားတဲ့ ပန်းအိုးတွေနဲ့ စက်ဘီးတွေလိုမျိုး အလွယ်အကူ ပြုတ်ကျနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို လုံခြုံစိတ်ချရအောင်လို့ အိမ်ထဲကို သွင်းထား ရပါမယ်။
-ပြတင်းပေါက် မှန်တွေမကွဲအောင်နဲ့ မှန်စတွေ လွင့်စင်မလာအောင် ကာကွယ်ဖို့ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံနိုင်တဲ့ ပြတင်းကာတွေ တပ်ရပါမယ်။ မရှိဘူးဆိုရင် ပြတင်းပေါက်မှန်တွေ လွင့်စင်မလာအောင် ဖလင်ကော်ပြားနဲ့ ကပ်ထားပါ။ ပြတင်းပေါက်တွေမှာ ကပ်ဖို့ ဖလင်ကော်ပြားမရှိဘူးဆိုရင် မှန်တွေပေါ်မှာ တိပ်နဲ့ ကြက်ခြေခတ်တွေ ကပ်ထားပြီး လိုက်ကာတွေကိုလည်း ပိတ်ထားပါ။
-ရေကြီးရေလျှံမှုကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ရေဆိုးရေနုတ်မြောင်းတွေကိုလည်း မြောင်းထိုးပြီး သန့်ရှင်းရေး လုပ်ထားပါ။
နောက်တစ်ချက်က အရေးပေါ် တိမ်းရှောင်ရေးစခန်းကို သွားနေဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ပြင်ဆင် စစ်ဆေးထားရပါမယ်။
အရေးပေါ်အိတ်ထဲမှာ သောက်ရေသန့်၊ အစားအစာ၊ လက်ကိုင် ရေဒီယို တစ်လုံးနဲ့ ဓာတ်မီး စတဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အတွင်းမှာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ပါရပါမယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ် တားဆီးရေးဆောင်ရွက်တဲ့အနေနဲ့ နှာခေါင်းစည်းတွေ၊ ဆပ်ပြာ၊ အရက်ပြန် ပါဝင်တဲ့ လက်သန့်ဆေးရည်နဲ့ ကိုယ်အပူချိန်တိုင်း ကိရိယာတွေကိုလည်း ထည့်ထားသင့်ပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နေရာကို တိမ်းရှောင်ရတဲ့အခါမှာ အရေးကြီးတဲ့အချက်က မိသားစုဝင် တစ်ဦးချင်း ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိတယ်၊ တိမ်းရှောင်ပြီးသွားရင် ဘယ်နေရာမှာ ပြန်ဆုံကြမယ်ဆိုတဲ့ အချက်တွေကို အချင်းချင်း ကြိုတင် တိုင်ပင်ထားဖို့လည်း လိုပါတယ်။
မိသားစုနဲ့ ခွဲခွာပြီး အဝေးမှာ သီးခြားနေတဲ့ အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေကို အရေးပေါ်အခြေအနေမှာ လိုအပ်လာရင် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ဖို့ နေရာကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပေးထားသင့်ပါတယ်။
မိုးသက်လေပြင်းတွေကျနေတဲ့ အချိန်အတောအတွင်း တချို့ခိုလှုံရေး စခန်းတွေဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် လက်ခံနိုင်တဲ့ ဦးရေက အကန့်အသတ်ရှိတာကြောင့် တိမ်းရှောင်လာသူ တချို့ကို လက်မခံနိုင်တာမျိုး ရှိပါတယ်။ တချို့ ခိုလှုံရေးစခန်းတွေမှာတော့ လူပြည့်သွားရင် တိမ်းရှောင်လာသူတွေနေဖို့ စင်္ကြံ ဒါမှမဟုတ် ဧည့်ခန်းမကြီးတွေမှာ စီစဉ်ပေးတတ်ပါတယ်။
ဒေသန္တရမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုလည်း ကျေးဇူးပြုပြီး ဝင်ရောက်စစ်ဆေးကြည့်ကြပါလို့ အကြံပြုပါတယ်။
ကိုယ်နေတဲ့ ဒေသရဲ့ တိမ်းရှောင်ရေးစခန်းတွေမဟုတ်ဘဲ တခြားနေရာကို တိမ်းရှောင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေရဲ့ ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့ အိမ်မှာ သွားရောက် တိမ်းရှောင်ဖို့လည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားသင့် ပါတယ်။
လျှပ်စစ်မီး ပြတ်တောက်တာတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါ ရေခဲသေတ္တာထဲက အစားအစာတွေ ပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။
ဂျပန်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ Panasonic က ပြောပြချက်အရ မီးပျက်သွားတဲ့အချိန်မှာ ရေခဲသေတ္တာ အမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီး ရေခဲသေတ္တာတံခါးကို တောက်လျှောက် ပိတ်ထားရင် အထဲက အစားအစာတွေကို ၂ နာရီကနေ ၃ နာရီလောက်အထိ ကြာအောင် ဆက်ပြီး အအေးဓာတ် ထိန်းထားနိုင်တာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။
မီးပျက်တဲ့အချိန်မှာ အအေးဓာတ်ကို ကြာကြာထိန်းထားနိုင်ဖို့ ရေခဲခန်းထဲက အစားအစာတွေကို တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ပူးကပ်ပြီးထားဖို့လည်း အဲဒီကုမ္ပဏီက အကြံပြုထားပါတယ်။